पूर्वमहान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाको सरकारलाई प्रश्न, मृत्युबाट फर्किंदा पनि मैले तिरेको करबाट मन्त्री र हाकिमले कहिलेसम्म मस्ती गरिरहने ?
१० श्रावण २०७६, शुक्रबार १०:५२
म बिहान ७ः३० बजे काममा हिडछु। म घरमा सुच्छु। यो मेरो श्रमले बनाएको घर हो । मेरो पैसाले किनेको जमिन हो। म यसको कर तिर्छु । मेरो छिमेकीले कोठा भाडामा लगाएका छ्न् । उनी त्यसको पनि कर तिर्छन् । मैले बिहान खाएको पाउरोटीको पनि म कर तिर्छु । मैले बाँच्न पनि कर तिर्नुपर्छ । म ६ घण्टा पढाउँछु । मेरो दिमाग र श्रमबापत म तलब पाउँछु । तर, त्यसमा पनि कर लाग्छ । म गाडी किन्छु । त्यसमा कर तिर्छु । प्रत्येक वर्ष कर तिर्छु । म पेट्रोल किन्छु, त्यसमा पनि कर तिर्छु । म सडकमा गाडी कुदाउँछु, त्यसको पनि कर तिर्छु । त्यस्तै, म सन्तानलाई पढाएबापत कर तिर्छु ।
म बिरामी हुन्छु, डाक्टरलाई जचाउँदा पनि कर तिर्छु । म औषधि किन्छ, त्यसमा पनि कर तिर्छु । म चस्मा किन्छु, त्यसमा पनि कर तिर्छु । म जुत्ता किन्छु, त्यसमा कर तिर्छु । म सर्ट किन्छु, त्यसमा कर तिर्छु । म कट्टु किन्छु, त्यसमा कर तिर्छु । म बिजुलीको शुल्क तिर्छु, त्यसमा पनि कर तिर्छु । म पानी पिउँछु, त्यसमा कर तिर्छु ।
१. मन्त्री र हाकिमलाई महँगो गाडी किन्छ ।
५. बाटोमा एक इन्चको पिच गरेर ठेकेदारलाई पैसा दिन्छ । हाकिम र मन्त्रीले ३५५ प्रतिशत घुस खान्छ्न् ।
७. गरिबले सिटामोल पाउँदैन । सुकुमबासीको घर छैन । थुप्रै महिला शरीर बेच्न बाध्य छ्न् । किन ?
म यो देशको सन्तान हुँ। मेरो जिम्मेवारी छ, यो देश जोगाउने। म नागरिक हुँ यो देशको । मेरो जवाफदेहिता छ देशको संंरक्षण गर्ने। तर, मलाई शासन गर्छन् मेरा देशका नेता, मलाई शोषण गर्छन्, मेरा नेता।
मैले भर्खर एउटा सन्तान पाएँ । उसले यो देशलाई जोगाउन ज्यान पनि दिन्छ भविष्यमा । तर, उसलाई लिएर घर फर्किंदा मैले उसलाई पाएबापत कर तिरें । अब उसको नाम दर्ता गर्दा कर तिर्नुपर्छ। उसलाई स्कुल भर्ना गर्दा कर तिर्नुपर्छ। उसको विवाह दर्ता गर्दा कर तिर्नुपर्छ। उसको नागरिकता लिँदा कर तिर्नुपर्छ।
म तपाईंलाई भोट हाल्न चाहन्छु, के मेरा यी प्रश्नको जवाफ तपाईंसँग छ ?
डा. युवराज संग्रौलाको फेसबुकबाट
नेपाली चिकित्सक प्रधानमन्त्रीमाथि खनिए, १०–१५ वर्ष मलाई केही हुन्न भन्ने अनि जनतालाई ढाँटेर सिंगापुर उपचार गर्न जान मिल्छ
आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, देशभर श्रीकृष्णको पूजा–आराधना गरी मनाइदै